News - KES esenidụt Business Department otu ụlọ na-eme ihe- ski
KES esenidụt Business Department otu ụlọ na-eme ihe- ski
On December 12, KES esenidụt Business ngalaba haziri a otu ụlọ eme ihe skai eme, n'oge COVID-19 ntiwapụ, na-enwe olileanya na ndị ọrụ niile nwere ike na-ike na ike, na-esi ọnwụ na-eme mmega, iguzogide oyi na nje, na-aga n'ihu na-enye ọrụ ka mma maka esenidụt ndị ahịa.
Oge oyi na-abịa, Beijing mara mma na-anabatakwa snowflakes na-efegharị, ndị ọrụ si KES nwere ọ theụ na ụwa nke ice na snow. Ha ji ọilyụ na-agba ski, na-agba ọgụ bọọlụ, na-enwe mmetụta ọsọ na oke agụụ nke oke ahụmịhe snow na Beijing Pinggu Yuyang ski.
Gba ọsọ bụ egwuregwu a na-ahụkarị n'èzí n'oge oyi na-akpali akpali. Usoro ski, ọ bụrụhaala na skis na-eguzo ọtọ, yana site na nkwado aka na ụkwụ, gbakwunyere teknụzụ kachasị mma, ị nwere ike ịwụ elu na snow!
Ski otu ụlọ na-eme, na-eme ka ndị ọrụ iji wusie ike otu ọrụ mmụọ na nsụhọ na asọmpi, ibe imekọ ihe ọnụ, zuru ezu okwu, ka onye ọ bụla na-amata onwe ha nke ọma, na-amụ ka mma ịghọta ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ọdịnala, n'otu oge, nwee ekele maka snow hapụ onye ọ bụla na-arụ ọrụ ka ọ nwee mmetụta zuru oke maka ndị ọrụ yana ikike ha nwere itinye aka na mmepe ụlọ ọrụ na-esote.
KES na-enye N95 masks n'efu ma nyefee ha na iwu.